November 12, 2021 - Celegroup
November 12, 2021 Celegroup1975 0
နွားနို့ကြိုက်သူများ မဖြစ်မနေ သတိထားသင့်တဲ့ နွားနို့ရဲ့ဆိုးကျိုးများ နွားနို့သောက်သူများသတိထားစရာပါ။ (၁) – နွားနို့ဆိုးကျိုး ယခင်က နွားနို့သောက်လျှင် ကယ်လ်ဆီယမ်အားကောင်း၍ အရိုးများကို ခိုင်မာစေ သည်ဟူ၍ ကလေး လူကြီးသောက်သုံးကြသည်။ ယနေ့ခေတ် နွားနို့သောက်ခြင်းသည် အရိုးပွရောဂါကို ဖြစ်စေခြင်း အကျိုးမဲ့စေသည့်အကြောင်းများရှိနေခြင်းကြောင့်နွားနို့ကို အသက်ကြီးသူများ သောက်ခြင်းနည်းလာသည်။ နွားနို့ကို သောက်မည်ဆိုလျှင် ကျက်ကျက်ဆူအောင်တည်ပြီးမှသောက်သင့်သည်။ နွားနို့ထဲတွင် ပါဝင်သော တီဘီပိုးသည့် တပွက်နှစ်ပွက်ဆူရုံနဲ့ သေသွားခြင်းမရှိပါ – နာနာဆူအောင်တည်ပြီးမှ သောက်သင့်သည်။ နို့စားနွားများမှ […]
ယခုလာမည့် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ဟာ အလွန်ထူးခြား၍ ရှားပါးသော(Super Moon) လပြည့် ဖြစ်ပါတယ်
ယခုလာမည့် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ဟာ အလွန်ထူးခြား၍ ရှားပါးသော(Super Moon) လပြည့် ဖြစ်ပါတယ် ယခု လာမည့် တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်၏ ဆေးပေါင်းခ ချိန်သည် ၈နာရီ ၄၆ မိနစ် ၃၅ စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ် အလွန် ထူးခြား၍ ရှားပါးသော (Super moon )လပြည့်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ၁၉၄၈တွင် တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး နှစ်၇၀ ကျော်ကြာ မှ တစ်ကြိမ်ထပ်မံကြုံခွင့်ရှိသော Super Moon ဖြစ်ပါတယ် […]
ကျိကျိ တက်ချမ်းသာမည့် လက္ခဏာ ပိုင်ရှင်များ….
ကျိကျိ တက်ချမ်းသာမည့် လက္ခဏာ ပိုင်ရှင်များ ၁။လက်သူကြွယ်ကလက်ညှိုးထက်ပိုရှည်တဲ့လူတွေဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဩဇာရှိတယ်၊နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတယ်သူတို့တွေဟာအပြောအဆိုဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးattentionဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲသိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ရည်မှန်းချက်လည်းကြီးပြီးအောင်မြင်တဲ့လူတွေလဲဖြစ်တယ်ဘာလုပ်လုပ်ထူးထူးချွန်ချွန်လုပ်တတ်တယ် ၂။လက်သူကြွယ် ကလက်ညှိုးထက်ပိုတိုတဲ့လူတွေဟာကိုယ့်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးတင်းတိမ်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဟာခေါင်ဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်ပြီးဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်သူတို့တွေဟာစိတ်တည်ငြိမ်စွာထားတတ်တဲ့ သူတွေဖြစ်ပြီးတစ်ခုခုကိုစလုပ်ရင်လည်းအဆုံးထိတာဝန်ယူတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ် ၃။လက်သူကြွယ်နဲ့ လက်ညှိုးတစ်ညီတည်းရှိနေတဲ့လူတွေဟာ ဂရုစိုက်ပေးတတ်တယ်၊မျှတမှုရှိတယ်၊ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်တတ်သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေဟာနူးညံ့သိမ်မွှေ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး ပဋိပက္ခတွေကိုရှောင်ရှားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေဟာ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတစ်ပါးသူကို ကူညီဖို့ အမြဲအသင့်ဖြစ်နေတတ်တယ်အလုပ်မှာဖြစ်ဖြစ်သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်၊အချစ်ရေးမှာဖြစ်ဖြစ် သစ္စာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အကောင်းမြင်တတ်ပြီးဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းမြင်ရန်ကြိုးစားတတ်ပါတယ်ဤစာဖတ်သူများအားလုံးပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ရွှေချစ်သူမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်။မျှဝေပေးခြင်းဟာလည်းမေတ္တာတစ်မျိုးပဲမို့ မျှဝေပေးပါနော crd; Zawgyi က်ိက်ိ တက္ခ်မ္းသာမည့္ လကၡဏာ ပိုင္ရွင္မ်ား ၁။လက္သူႂကြယ္ကလက္ညႇိဳးထက္ပိုရွည္တဲ့လူေတြဟာဆြဲေဆာင္မႈရွိတယ္ဩဇာရွိတယ္၊ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတယ္သူတို႔ေတြဟာအေျပာအဆိုဆက္ဆံေရးေကာင္းၿပီးattentionဘယ္လိုရေအာင္လုပ္ရမလဲသိတဲ့လူေတြျဖစ္တယ္ရည္မွန္းခ်က္လည္းႀကီးၿပီးေအာင္ျမင္တဲ့လူေတြလဲျဖစ္တယ္ဘာလုပ္လုပ္ထူးထူးခြၽန္ခြၽန္လုပ္တတ္တယ္ ၂။လက္သူႂကြယ္ ကလက္ညႇိဳးထက္ပိုတိုတဲ့လူေတြဟာကိုယ့္ကိုကိုယုံၾကည္မႈရွိၿပီးတင္းတိမ္တတ္တဲ့လူေတြျဖစ္တယ္သူတို႔ဟာေခါင္ေဆာင္ေကာင္းေတြျဖစ္ၿပီးဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္သူတို႔ေတြဟာစိတ္တည္ၿငိမ္စြာထားတတ္တဲ့ သူေတြျဖစ္ၿပီးတစ္ခုခုကိုစလုပ္ရင္လည္းအဆုံးထိတာဝန္ယူတတ္တဲ့သူေတြျဖစ္တယ္ ၃။လက္သူႂကြယ္နဲ႔ လက္ညႇိဳးတစ္ညီတည္းရွိေနတဲ့လူေတြဟာ ဂ႐ုစိုက္ေပးတတ္တယ္၊မွ်တမႈရွိတယ္၊ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္တတ္သူေတြျဖစ္တယ္သူတို႔ေတြဟာႏူးညံ့သိမ္ေမႊ႕တဲ့သူေတြျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡေတြကိုေရွာင္ရွားတတ္တဲ့သူေတြျဖစ္တယ္သူတို႔ေတြဟာ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြျဖစ္ၿပီးတစ္ပါးသူကို ကူညီဖို႔ အၿမဲအသင့္ျဖစ္ေနတတ္တယ္အလုပ္မွာျဖစ္ျဖစ္သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ျဖစ္၊အခ်စ္ေရးမွာျဖစ္ျဖစ္ […]
ကမ္ဘာပေါ်တွင် သူခိုးမရှိသော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ထိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပင်။ ထိုစကားကို ပြောခဲ့သူမှာ အိန္ဒိ ယနိုင်ငံသား ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီပင် ဖြစ်သည်။ အီဂတ်ပူရီပြည်နယ်၌ ဗုဒ္ဓ ၏ ၀ိပဿနာ တရားတော် များ ကို ကမ္ဘာသို့ ဖြန့်ဝေလျက်ရှိသော ဂုရုကြီးဦးဂိုအင်ကာ၏ အဘိုးတော်သူပင် ဖြစ်သည်။ အရောင်းအဝယ် ကုန်သည် အလုပ်ဖြင့် ကမ္ဘာအနှ့ံ ခြေဆန့်ခဲ့ဖူးသော ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီသည် သူ […]
မင်္ဂလာဦးည မျက်ကွင်းတွေညိုပြီး သတိပါလစ်သွားခဲ့ရသော သတို့သမီးရဲ့ အဖြစ်…
အပ်ိဳေလးေတြမသိေသးတဲ့ မဂၤလာဦးည မ်က္ကြင္းေတြညိဳၿပီး သတိပါလစ္သြားခဲ့ရေသာ သတို႔သမီး မဂၤလာဦးည (၃)ဦးအေၾကာင္း အပ်ိဳေလးေတြမသိပါဘူး ပူပူေႏြးေႏြး မဂၤလာေဆာင္ ၿပီးကာစ ေကာင္မေလးကို သူ႔သူငယ္ခ်င္း အပ်ိဳမ တစ္သိုက္က တိုးတိုးတိတ္တိတ္ေမးသည္။ “ဟဲ့… နင့္မွာ မ်က္တြင္းေတြကိုက်လို႔ တစ္ညလုံးမအိပ္ဘူးလား??? မဂၤလာဦးည အေတြ႕အႀကဳံေလး ငါတို႔သိရေအာင္ေျပာျပပါလား?” “ေတာ္ပါၿပီဟာ မေျပာခ်င္ပါဘူး” “ေျပာပါဟာ နင္ကလည္း ငါတို႔ေတြဗဟုသုတရတာေပါ့” “အို… ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္ေျပာရမွာ ရွက္စရာႀကီး” “ေျပာပါဟာ နင္ကလည္း… အခ်င္းခ်င္းေတြပဲဟာ” “ဒီေလာက္ေတာင္သိခ်င္ေနၾကလည္း […]
ရေသန့်ဘူးတွေ တံဆိပ်ပေါင်းစုံ နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်ယူလို့ရနေတော့ သတိမထားဘဲ ဒီလိုပဲ သောက်သုံးနေကြတဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ ။ သို့သော်လည်း ပလက်စတစ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဒီရေသန့်ဘူးတွေဟာ အမှန်တကယ်ရော စိတ်ချမှု ရှိရဲ့လား ၊အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်လားဆိုတာကို ဂရုမပြုမိကြပါဘူး။ ရေသန့်ဝယ်တဲ့အခါ ဘူးရဲ့ အောက်ပိုင်းကို သေချာကြည့်ကြည်ပါ ။ PP , HDPE ,HDP , PET စသဖြင့် စကားလုံးလေးတွေ ပါတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ […]